Hunting the jobs: 2008
Posted by Nay Linn Aung at 10:18 1 comment:
Posted by Nay Linn Aung at 21:36 No comments:
Posted by Nay Linn Aung at 10:59 No comments:
Passport အဆင်သင့်ရှိ သူများဆို ပိုအဆင်ပြေပါတယ်၊ မင်းတို့ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက Sponsor Letter အတွက် အဆင်ပြေမယ် ထင်တဲ့သူငယ်ချင်းဆီကို လှမ်းပြီး အကူအညီတောင်းပါ၊ Sponsor Letter ရပြီဆိုရင်တော့ Visa ကိုမြန်မြန်သာလျှောက်ပေတော့၊ နောက်ပြီးတော့ ရန်ကုန်ကနေ ထွက်မလာခင်မှာ အိမ်ခန်းကိစ္စကို သေချာအောင် စီစဉ်ဖို့လိုပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာက နေစရိတ်၊ စားစရိတ်က အရမ်းမြင့်လွန်းတော့ အဲဒီကိစ္စ သေချာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုလည်း ပိုပို လိုလို တစ်နှစ်လောက် Open လုပ်လာခဲ့ရင်တော့ စိတ်ချလက်လာလို့ရပြီပေါ့။
ရောက်ရောက်ချင်း ဆိုသလိုတွေ့ရမှာတော့ Immigration Check Point ပါဘဲ အဲဒီမှာသတိ့ထား ရမှာကတော့ လူတန်းရှည်နေရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ counter ကိုသွားတန်းစီလို့ရပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ White Card ဖြည့်ဖို့မေ့လာခဲ့ရင်တော့ Check in counter မရောက်ခင် ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ White Card တွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ထားပေးထားပါတယ်၊ ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ Ticket, Passport & White Card သုံးခုစလုံးကို လက်ထဲမှာကိုင်ထားပြီး တန်းစီစောင့်နေရုံပါဘဲ၊ Officer ကမေးတာမှန်သမျှကို အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်နဲ့သာ ဖြေပါ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး၊ Office ကအ၀င်တုန်းထုပေးပြီး White Card အပိုင်းလေး ပြန်ပေးလိမ့်မယ် အဲဒါကိုတော့ သေသေချာချာ သိမ်းပေတော့၊ အလုပ်ရလို့ Work Pass တစ်ခုခုတင်ရင် အဲဒီ White Card ကအရေးကြီးပါတယ် အဲဒါကြောင့်ပါ။
လေဆိပ်ကနေထွက်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကို MRT ဆိုတဲ့ငနဲကစောင့်ကြိုနေမှာပါ၊ စစချင်း MRT ပေါ်ရောက်ရင်တော့ဖြင့် သိပ်ပြီးနေသာကျမှာ မဟုတ်သေးဘူး၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း တော်တော်လေး ရွာလည်းခဲ့ပါတယ်။ MRT စီဖို့အတွက် E-Zlink ကဒ်လိုပါတယ်၊ Adult အတွက်ဆိုရင် SGD $15 ပေးရပါတယ်၊ နောက်ထပ် Topup ကတော့ အနည်းဆုံး SGD 10$ လုပ်ရပါတယ်။
Posted by Nay Linn Aung at 02:24 No comments:
First Experiences ဆိုရင်တော့ အလုပ်မရွေးပါနဲ့ အလုပ်ကဘဲရွေးချယ်ပါစေ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံနှင့် ဒီမှာလုပ်ကိုင်ရမယ် လုပ်ငန်းခွင် အတိုင်းအတာက တစ်ခြားစီဖြစ်နေလို့ပါ။ အစစ အရာရာ ကွာခြားလွန်တော့ စစချင်းကို ဆောက်နဲ့ထွင်းလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ၊ လူတိုင်းလိုလိုတော့ လစာကောင်းကောင်း၊ အလုပ်ကောင်းကောင်းကို ပိုပြီးနှစ်သက်ကျတာ လူ့သဘာဝပါ။ Online job တွေကို Apply လုပ်ရာမှာလည်း Site တွေကနေ Apply မလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ်ပိုင် Email Account တစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီးတော့ Employer တွေဆီကို အရောက်ပို့ပါ။ အဓိကလိုအပ်တာတော့ Cover Letter ပါဘဲ၊ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာဆိုသလိုပေါ့ဗျာ၊ ပြီးရင် Resume ကိုတတ်နိူင်သလောက် အသေးစိတ်ရေးပါ(Word Format) ကိုပိုပြီးသုံးကျတယ်။ Work Pass လျှောက်ဖို့အတွက် အဓိကလိုအပ်တာတော့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Education Period ကိုသေသေချာချာ စီစစ်ပြီးမှ ရေးစေချင်ပါတယ်၊ အဲဒါမှ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတကာ အသိ့အမှတ်ပြု Certificae တော်တော်များများရှိရင် ပိုပြီးကောင်းပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာက International Standard ကိုစည်းစံနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နေကျလို့ပါဘဲ၊ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ လူပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်း ဖြစ်ကျရပါလိမ့်မယ်။ နော်ကပြီးတော့ Straight Time ကိုလည်းတစ်ပတ်နှစ်ရက်လောက် ၀ယ်ပြီး ပါသမျှကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ်ထင်တယ့် အလုပ်မှန်သမျှကို ကြိုးစားစေချင်တယ်။ အလုပ်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာ စရိတ်စကကိုချွေတာတဲ့ အနေနဲ့ မဖြစ်မနေသွားစရာရှိမှ သွားတာလာတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ၊ လုပ်ငန်းခွင့်အခြေကျပြီ ဆိုရင်တော့ဖြင့် အားရပါးရ Explorer လုပ်နိူင်ပါပြီခင်ဗျာ။ အထူးဂရုစိုက်စေချင်တာက Work Pass ကို online apply လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် လိုအပ်မယ့်အရာ မှန်သမျှကို အသေးစိတ်ရေးချ(ဒါမှမဟုတ်) Print out ထုတ်ပြီး apply မလုပ်ခင် Employer လက်ထဲကို အရောက်ထည့်ပေးပါ၊ ကိုယ်လိုအပ်တာကို အဲဒီအချိန်မှာ ပြောခွင့်ရှိပါသေးတယ် လွန်သွားရင်တော့ ဘုရားသာတပေတော့ဗျို့၊ နှစ်လုံးရောဂါတောင် ချက်ချင်းရသွားနိူင်တယ်။ အပြောမဟုတ်ဘူးနော် ကိုယ်တွေ့ပါ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ နောင်ကျွန်တော် အချိန်ရရင် ရသလိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါ့မယ်။
Posted by Nay Linn Aung at 01:21 No comments:
You must take care on this facts.
If you wnat to hunting the job in oversea country. You should be well prepaired the following facts and figure.
1> Which country do you prefer ?
2> What is your professional skills ?
3> How many stay you can get ?
4> Which media do you use to submit your application ?
5> How to submit quiker than others ?
6> How many media you can use ? (Mobile, Laptop, Printer...etc)
7> Understending of the Employer job scope.
You can choose you mostly prefer region of the world !
You should take care this fact indeep, cuasze that was directly effecting to you.
Take care to choose your Visa type for stay pass at the oversea country.
Now, most of the people are using to submit their application by email & online job sites.
You should be using the Outlook Express or any may client to submit your application by mail
Well preapired your Resume, Cover Letter, Recommendations. Professional Certificats ..etc
That was directly depend on your budget spent on job hunting. Minimum must have mobile for calling & direct contact from the employer, who intrestend your application.
Reading carefully about the job advertisment and well understanding on employer requirement job scope (Such as, Rqeuirement, You should be..etc)
I will be publish soon in Burmese
Posted by Nay Linn Aung at 23:31 No comments:
I just want to share some job hunting techniqe. First you need to know is which job scope you can do. Second thing is prepaired your resume simple and clearly in word or PDF format as you like. Third step to make sure your resume and the certificate you have, because that was important for your work pass to approved. Fourth things is start hunting your jobs. (First priority to be hunt Walk in interview, search in daily news paper)(Second hunt online jobs)
Note down which job did you apply by date with contact person, phone number, email, detail addres (zip code is imp). The better way you makeacall by phone and take appoitment for walk in interview.
Don't forgot your applying job positon and job scope before you go to interview. If you are hunt the job in singapore, following Useful URL link provide to findaplace which you want to go to.
Posted by Nay Linn Aung at 22:53 No comments: